Mety Amiko ve Izy? | Manontany ny Tanora
Misy olona mba tianao ve, ka eritreretinao hoe tsara raha lasa vadinao? Ahoana anefa no hahafantaranao raha mety aminao izy na tsia?
Aza sodokan’ny bika aman’endriny fotsiny fa jereo koa ny toetrany. Na ny ankizivavy mahafatifaty indrindra aza mantsy tsy voatery hoe azo itokisana. Ny ankizilahy be mpitia be koa tsy voatery hoe tsara fitondran-tena. Ianao anefa mba mitady olona tena mifanentana aminao sy hanampy anao hanatratra ny tanjonao, ka hahafinaritra anao ny miaraka aminy.—Genesisy 2:18; Matio 19:4-6.
Fantaro ny tena toetrany
Diniho amin’ny saina tsy miangatra ilay olona tianao. Mitandrema anefa! Mety ho ny toetra tsarany ihany mantsy no tianao ho hita. Aza maika àry, fa miezaha hamantatra ny tena toetrany.
Tsy miezaka mijery ny tena toetran’ny olona tiany ny tanora maro. Ny zavatra itovizan’izy ireo kosa no tonga dia hitany, ohatra hoe: “Mitovy ny hira tianay”, “Mitovy ny fialam-boly tianay”, “Mitovy hevitra foana izahay!” Ezaho fantarina anefa ny tena toetran’ilay olona tianao, izany hoe ny ‘toetra miafina ao am-pony.’ (1 Petera 3:4; Efesianina 3:16) Aza variana mieritreritra ny zavatra itovizanareo. Diniho kosa izay mitranga rehefa tsy mitovy hevitra ianareo. Ho fantatrao kokoa izy amin’izay.
Diniho, ohatra, ireto:
Inona no ataony rehefa mifamaly ianareo? Manizingizina ny heviny ve izy, na manampatra ny ‘hatezerany’, na ‘manevateva’ anao? (Galatianina 5:19, 20; Kolosianina 3:8) Sa kosa izy tia fihavanana ka vonona handefitra aminao raha mbola azony atao?—Jakoba 3:17.
Saro-piaro be ve izy, ka tsy tiany hifandray amin’olon-kafa mihitsy ianao? Tadiaviny hanao izay tiany foana ve ianao? Tsy manaiky ve izy raha tsy fantany izay rehetra ataonao? Hoy i Harisoa: ‘Misy olona tezitra rehefa tsy miteny an’izay rehetra halehany ilay olon-tiany, dia ady tsy vita ilay izy avy eo. Efa tokony ho tonga saina ianao raha izay koa no mahazo anao.’—1 Korintianina 13:4.
Ahoana no fahitan’ny hafa azy? Miresaha amin’ny olona mahafantatra azy tsara, ohatra hoe Kristianina matotra eo anivon’ny fiangonana. Ho fantatrao amin’izay na “tsara laza” izy na tsia.—Asan’ny Apostoly 16:1, 2.